Afhayeenkii xukuumadda, Ridwaan oo is-casilay - Caasimada Online
Home Warar Afhayeenkii xukuumadda, Ridwaan oo is-casilay
Afhayeenkii xukuumadda, Ridwaan oo is-casilay
Muqdisho (Caasimada Online) – Maanta oo ay taariikhdu tahay 22/06/2015, waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqay inaan iska casilay xilkii aan u hayey Qaranka Soomaaliyeed labadii sano ee la soo dhaafay ee ahaa Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo La-taliyaha Warfaafinta ee Ra’iisul Wasaaraha, anigoo warqaddii istiqaalada u gudbiyey Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Runtii, sharaf weyn ayey ii ahayd inaan mudadaasi u soo shaqeeyo dalkayga, xilligan oo dalku marayo duruufo adag oo aan rajaynayo in qaranku ka gudbi doono.
Sababta xilkan aan uga tegay waa mid aniga ii gaar ah. Laakiin, waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa inaan mar walba u taagnaan doono ka shaqaynta dhismaha qaran Soomaaliyeed iyo u-adeegidda dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Mudadii aan sida dhow ula shaqaynayey Xukuumadihii kala duwanaa ee ay Ra’iisul Wasaarayaasha ka ahaayeen Mudane Cabdi Faarax Shirdoon, Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, waxaa jiray horumaro la taaban karo oo loo qaaday dhinaca wanaagsan. Dhinacyada uu dalku horumarka ka sameeyey waxaa ka mid ah siyaasadda, amniga, arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Inkastoo aan sheegay horumaradaasi, waxaa hadana jira caqabado wiiqaya taabbagalka guulahaasi la xaqiijiyey, haddii aanay hoggaanka dalka iyo shacabkuba iska kaashan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta midnimada dadka Soomaaliyeed, ilaalinta xasiloonida siyaasadda, dhiirrigelinta dib-u-heshiisiinta, adkaynta caddaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, dhismaha iyo tayeynta hay’adaha Dawladda iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada iyo weliba abuuritaanka fursado shaqo oo ay helaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku socotaa jidka horumarka, dimuquraadiyadda iyo dib-u-dhiska, laakiin si loo xaqiijiyo hiigsiga siyaasadeed iyo himlooyinka shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in madaxdu ayka dhababeeyaan go’aanka dalka lagu gaarsiinayo doorashooyin xor ah si awoodda dib loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed, oo iyagu ay soo doortaan cidda hoggaaminaysa ama wakiilka uga noqoneysa siyaasadda dalka. Doorashooyin xor ah oo la gaaro iyo talada oo ay shacabku yeeshaan, waxay horseedaysaa in la helo madax karti leh iyo in laga gudbo nidaamka qabyaaladeed ee dalka ka jira oo aanu arko mid fashilmay oo aan u adeegayn dhismaha qaran Soomaaliyeed iyo masaalixda ummaddeena.
Intaa markaan ka gudbo, waxaan doonayaa inaan halkan si qalbi furan ugu mahadceliyo madaxdii, hawlwadeendii iyo bahda warbaahinta oo dhammaantood xiriir iyo wada shaqayn wanaagsan na dhex maray mudadii aan xafiiska joogay. Waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa qoyskayga iyo saaxiibo badan oo igu dhiirigaliyay in aan qabto shaqadan oo dad badani ay khatar inteeda le’eg ay u arkayeen.